Matrika Pokhrel | Nepali Stories
Matrika Pokhrel – Hariyo Batti
आज विहानै रामनाथ आफ्नो पार्टी नेता क. अशोकको घरमा जरूरी पत्र पु¥याउन जाने तयारीमा छ । त्यसैले ऊ हरेक कामहरू चाँडै चाँडै सिध्याउँदै छ । आज अलि सबेरै उठ्यो । श्रीमती काममा गएकी छ, खाना आफैले बनायो । हिजो पार्टी कार्यालयमा बेलुकापख एकजना भद्र मानिसले ‘अत्यन्त जरूरी’ भन्दै क. अशोकको नामको एउटा पत्र छोडेर गयो । हुन त, क. अशोकले हिजै बेलुका पार्टी अफिसमा फोन गरेर भोलि बिहान कोही कार्यकर्ताहरूसँग पनि भेट्न नसकिने हुनाले कसैलाई पनि मेरो घरमा नपठाउनु भनेका थिए । तर रामनाथले सोच्यो – यति जरूरी पत्र लिएर त जानै प¥यो नि, नत्र फेरि पार्टीलाई ठूलै समस्या पर्नसक्छ ।
म त विहानै आइपुग्नु पथ्र्यो । आउन ढिलो भयो, अहिले नै नभेटे कामै बिग्रन सक्छ । रामनाथको जवाफ पाउने वित्तिकै त्यो मानिसले अशोकले एकजना मानिस आइपुग्नु भएको छैन भन्नुहुन्थ्यो, म पर्खिएर बसेको भन्दै मोटरसाइकल स्टार्ट ग¥यो ।
क. अशोकको यत्रो महलमा … । रामनाथले वरिपरि हे¥यो र अचम्म मान्यो । सुन्दर बगैंचा । मोटरहरूको घुइँचो । रामनाथसँगै आउनेसँग भित्र पस्यो । हरियो बत्तीको प्रकाश छरिएको बैठक हल । ठूला ठूला खाइलाग्दा मानिसहरू । भव्य सजाइएको बैठक कक्ष । वियर र रक्सीका परिकारहरू । विशेष प्रकारको सोफामाथि बसेर क. अशोक भन्दै थियो – अब पार्टीलाई हामीले सोचेको बाटोमा ल्याउन धेरै समय लाग्नेछैन । रामनाथले आफूले चिनेका अन्य एकदुईजना मानिसहरूलाई पनि त्यहाँ देख्यो ।
कसलाई सोधेर यहाँ आएको ? बेइमान … तल्लो स्तरमा ओर्लिएर कहिल्यै पनि यसरी अशोकले गाली गरेको रामनाथलाई थाहा थिएन ।
सडकमा निस्किएपछि डरले रामनाथको जीउ हप्प फुलेजस्तो भयो । डरले पछाडि फर्किएर हेर्नसम्म सकेन उसले । सडकमा आफ्नो वरिपरि हे¥यो – थुप्रै मानिसहरू छन् । कता कता डर कम भएको महसुस ग¥यो उसले । मनमनै फेरि डरको पर्वत अग्लियो – कतै ती पछाडि आउनेहरू यहाँसम्म त आइनपुग्लान् ।
यतिखेरै उसको मनले अर्को कटु पीडाको अनुभूति ग¥यो । एक बखत क. विनयले पार्टीमा राजतन्त्र सामन्तवादको नाइके हो, संसदीय व्यवस्थाले जनताको हीत गर्दैन भन्ने मत राख्दा पार्टीलाई भाँड्न खोजेको आरोप लगाएर निस्कासन गरिएको थियो । रामनाथले अन्तरसम्वन्ध खोज्यो – आजको यो घटना र त्यो तथ्यको ।
रमेशले अचम्म मानेर उसको कुरा सुनिरह्यो । हरदम अशोकको पक्षधर रहने मानिसबाट यस्तो शब्द कसरी … ?
पत्रबाट आँखा माथि उठाएर रामनाथले हे¥यो – रमेश चाँडो–चाँडो पाइला चाल्दै टाढा पुगिसकेको थियो ।
Posted in Matrika Pokhrel
Tagged Literary work of Nepali Story Writer Matrika Pokhrel Literatures of Nepali Story Writer Matrika Pokhrel Matrika Pokhrel's Nepali Story Hariyo Batti Nepali Author Matrika Pokhrel Nepali Katha Nepali Katha Hariyo Batti by Matrika Pokhrel Nepali Kathakar Nepali Kathakar Matrika Pokhrel Nepali Rachanakar Kathakar Matrika Pokhrel Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Matrika Pokhrel Nepali Stories Collection Of Matrika Pokhrel Nepali Story Blog Nepali Story Hariyo Batti by Matrika Pokhrel Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Matrika Pokhrel Sahityakar Matrika Pokhrel Ka Nepali Katha Haru